Toeram-pisakafoanana Vegetarian amidy any UAE Dubai - BusinessFinder.Me
Piyush A Agrawal
Trano fisakafoana Indiana Vegetarian tena tsara hita ao Meena Baazar. Ny trano fisakafoanana dia manolotra serivisy Tiffin Indiana Avaratra manerana an'i Dubai, Chaat, Dine in and Outdoor Catering. Voalamina tsara sy nohavaozina ny zava-drehetra. Misy Pet Pooj...
Date : Novambra 26, 2021
Trano fisakafoana Indiana Vegetarian tena tsara hita ao Meena Baazar.
Ny trano fisakafoanana dia manolotra serivisy Tiffin Indiana Avaratra manerana an'i Dubai, Chaat, Dine in and Outdoor Catering.
Voalamina tsara sy nohavaozina ny zava-drehetra. Misy Pet Pooja POS system , Solosaina 1 , Rafitra Fanatrehana Fingerprint Biometrika , Fakan-tsary cctv 16 , WiFI tsy misy fetra , finday 2 an-tariby .
Eo ambony rihana dia misy faritra fisakafoanana ho an'ny olona 45 eo ho eo.
Ejari vita vao haingana ary ny fahazoan-dàlana ara-barotra nohavaozina vao haingana.
Misy Kichen lehibe ary toerana fivarotana 2 ary efitra fandroana 1. Manana ny rafitra Window Chaat Counter izahay.
Ny orinasa dia nanendry masoivoho ho an'ny marketing amin'ny media sosialy ary manao dokam-barotra amin'ny Instagram, Facebook izahay.
Mavitrika izahay amin'ny Talabat, Noon ary Zomato.
Efa ho vonona tsy ho ela ihany koa ny tranokala ary efa nisoratra anarana tamina Orinasa Fampandrosoana an
Fampiharana interactive hanaraha-maso ny mpanjifa Tiffin isam-bolana.
Mivarotra ity trano fisakafoanana ity izahay satria mieritreritra ny hiverina any India ho an'ny tena manokana.
# afaka mivarotra ny fiarako amin'ny orinasako aho
#Hatraiza no azoko hivarotana ny orinasako
# Ahoana no fomba hivarotana hevitra amin'ny orinasa fiara
# Ahoana no fomba hivarotana vokatra herbalife amin'ny Internet
#Running Vegetarian Restaurant amidy any dubai
#Fikarakarana Vegetarian amidy any UAE
#sell ny hevitry ny orinasako
#sho tokony hamidiko ny orinasako
#Fisakafoanana Vegetarian amidy
Fisakafoanana #Vegetarian amidy any dubai
Fisakafoanana #Vegetarian amidy any UAE